काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ ।
नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा गठन हुने सरकारबाट फाइदा उठाउँदै आयो । त्रिमूर्ति निकेतन स्थापना गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट फाइदा लिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग पनि निकट सम्बन्ध राखेर फाइदा उठाउन नइ सक्रिय रह्यो । लोकमानका बाबु भूपालमानसिंह कार्कीको जीवनीसमेत प्रकाशित गरेका छन् उनीहरूले ।
शक्तिकेन्द्रहरूसँग निकट रहेका उनीहरूको चकचकी माधवकुमार नेपालदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि देखियो । तर, अहिले भने नइको सम्बन्ध प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिग्रिएको बताइन्छ । त्यही कारण हरेक सरकारलाई प्रभावमा पारेर कुनै व्यक्ति ८५ वर्ष पुग्नै लाग्दा शतवार्षिकी कार्यक्रम बनाएर तिनका नाममा पुरस्कारको धन्दा चलाउने कार्य रोकिएको छ ।
नईले विभिन्न विधामा बर्सेनि लाखौंको पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । यसको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनीहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्टले ३० लाख रुपैयाँ उछिट्याएका थिए । त्यस रकमबाट विष्टका बुबा चन्द्रनिधि र आमा धनकुमारी विष्टका नाउँमा हरेक वर्ष एक लाख रुपैयाँ राशिको ‘नइ चन्द्रधन पुरस्कार’ स्थापना गरे । यस्तो धन्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कालमा पनि देखिएको थियो । त्यो बेला प्रचण्ड सरकारले त्रिमूर्ति निकेतनलाई १० लाख सहयोग गरेको थियो । बदलामा प्रचण्डलाई देवकोटा सम्मान दिने निर्णय गरेको थियो तर चर्काे विरोध भएपछि प्रचण्डले सो पुरस्कार नलिने निर्णय गरेका थिए ।
नईले नेपाली भाषा साहित्यमा जोडिएकाहरूलाई त्रिमूर्ति पुरस्कार र त्रिमूर्ति सम्मानका अलावा विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ । आउँदो २०७६ वैशाख ३० गते नइले १० जनालाई पुरस्कार दिँदैछ । नइ भावी पुरस्कार’ चिकित्सा क्षेत्रका सुविख्यात डा. गौरीशंकरलाल दासलाई, ‘नइ कीर्तिनिधि पुरस्कार’ राष्ट्रिय झन्डाका निर्माता इन्जिनियर शंकरनाथ रिमाललाई, ‘नइ ईश्वर बराल पुरस्कार’ समालोचक प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीलाई दिइँदैछ । लोकमान सिंह कार्कीको पिता भूपालमानका नाममा स्थापित ‘नइ भूपालदुर्गा पुरस्कार’ नायिका मनीषा कोइरालालाई दिइँदै छ । यस्तै ‘नइ देरुनिख सुकीर्ति पुरस्कार’ मह जोडीलाई दिइने भएको छ । ‘नइ भाजप पुरस्कार’ आधुनिक मोतीराम भट्टका रूपमा परिचित चूडामणि रेग्मीलाई, हिन्दूधर्म र संस्कृतिका अभियन्ता, लेखक तथा चिन्तक प्रा.डा. सोमप्रसाद खतिवडालाई ‘नइ चन्द्रधन पुरस्कार’, सुप्रसिद्ध संगीतकार, गायक तथा गीतकार दीपक जंगमलाई ‘नइ कोइलीदेवी पुरस्कार’ र गीता खत्रीलाई ‘नइ गणेशदुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार’ दिँइदै छ । यी सबै पुरस्कारका राशि जनही एक लाख रुपैयाँ रहेका छन् । यी पुरस्कारहरू सत्यमोहन जोशीको १०१औं शुभजन्मोत्सवका अवसरमा उनकै हातबाट वितरण हुनेछन् । तर, यी पुरस्कारहरूको स्रोत के हो भन्ने कुरा अज्ञात नै छ ।